warkii.com » Arsenal Oo Rafcaan Ka Qaadatay Casaankii Eddie Nketiah
Arsenal Oo Rafcaan Ka Qaadatay Casaankii Eddie Nketiah
Arsenal ayaa go’aansatay inay rafcaan ka qaadato kaadh cas oo la siiyey da’yarka Eddie Nketiah kulankii ay barbarraha 1-1 la galeen Leicester City.
21 jirkan ayaa kaadh cas loo taagay afar daqiiqadood oo kaliya isaga oo garoonka ku jira, kaddib markii uu qalad xun ku galay difaaca Foxes ee James Justin.
Garsoore Chris Karanagh ayaa kaadh huruud ah siiyey Eddie Nketiah, laakiin VAR ayaa baadhitaan ku samaysay inta uu le’ekaa qaladka uu da’yarkani sameeyey, waxaana la soo helay inuu halis geliyey Justin, waxaana kaadhkii digniinta ahaa loogu beddelay casaan.
Arsenal oo bixitaanka Eddie Nketiah uu dhibaato ku noqday, isla markaana 10 ciyaartoy ku dheeshay intii ambe oo dhan, ayaa halka ciyaartoy ee la dheeraa lagaga faa’iidaystay, waxaana ciyaarta oo shan daqiiqadood ka hadhsan tahay goolka barbaraha ka dhaliyey Jamie Vardy.
Nketiah oo ay u ahayd habeen dhib badan, waxa uu garoonka ka baxay isaga oo aan xataa kubadda taaban, laakiin kooxdiisa Arsenal ayaa go’aansatay inay murugada ka maydho oo ay rafcaan ka qaadato kaadhka cas ee da’yarkeeda la siiyey.
Casaanka tooska ah ayaa macnihiisu yahay inuu saddex ciyaarood seegi doono, kuwaas oo ah kulamo adag oo ay Arsenal u baahan tahay inay hesho dhamaan ciyaartoygeeda xorta ka ah dhaawacyada.
Ciyaarta ugu horreysa ee uu seegi doono ayaa ah Tottenham, waxaana ku xigaysa Liverpool iyo kulanka saddexaad oo ah semi-finalka FA Cup oo ay Manchester City ku waajahayaan garoonka Wembley.
Laakiin rafcaanka ayay Gunners rajo ka qabtaa in meesha uu ka saari doono ganaaxa ciyaartoygan amaba lagu yarayn doono ciqaabtiisa, taas oo u saamixi karta in saddexda ciyaarood aanu wada maqnaan.